MAQAALO Caabuqa Coronavirus Iyo Siyaabaha Looga Hortagi Karo! W/Q;Abdirahim Ahmed. | Gabiley News Online
MAQAALO Caabuqa Coronavirus Iyo Siyaabaha Looga Hortagi Karo! W/Q;Abdirahim Ahmed.
Coronaviruses (CoV) waa qoys weyn oo fayraska oo keena cudur u dhexeeya hargabka caadiga ah iyo cuduro aad u daran, sida fayraska loo aqaano 1, (Bariga Dhexe Respiratory Syndrome (MERS-CoV)
kass oo laga helay Sacuudi Carabiya 2012 2, Xanuunka fayraska asaasiga ah ee loo yaqaano (SARS-CoV-) kass oo isna laga helay China 2002.
3 Xanuunka fayraska loo aqaano fayraska shimbiraha iyo digaagga ( avian influenza) kaas oo laga helay China 1996/97kii lakiin asalkii la helay “1878 lagana helay Waqooyiga talyaaniga (Perroncito E. Epizoozia tifoide nei gallinacei)”
Cudurka Coronavirus (COVID-19) waa fayras cusub oon hore loo arag lagana helay China dhamadkii 2019 kaas oo aan
horay loogu aqoonsan bini-aadamka. Hadaba was maxay coronaviruses?
Coronaviruses waxa loo yaqaana zoonotic, micnaheedu waa in lagu kala qaado ama isku gudbiyaan xoolaha ama xayawaanka iyo dadku. Baadhitaanno faahfaahsan ayaa lagu ogaadey in SARS-CoV laga
soo gudbiyey (bisadaha civet cats)una soo gudbiyey aadanaha iyo MERS-CoV laga soo qaaday ama soo gudbiyeen geel kadib ay xanuunadaa fayrasku ku dhaceen dadka. Avian influenza, “Ifilada A / H5N1 ayaa markii ugu horreysay laga laga helay Shiinaha sanadkii 1996. Cudurrada fayraska shinbiraha ee bani’aadamka u gudbaya waxaa markii ugu horreysey laga soo sheegey 1997 Hong Kong. Aasiya H5N1 waxaa markii ugu horaysay lagu arkay bini aadamka sanadkii 1997 mudadii xanuunka digaaga ka dillaacay Hong Kong waxaana ilaa iyo xilligaas laga helay digaagga iyo shimbiraha duurjoogta ah in kabadan 50 waddan oo ku yaal qaaradda Afrika, Aasiya, Yurub, iyo Bariga Dhexe. Fayraska hargabka avian waxaa laga helaa dheecaanka sanka (sanka), afka, iyo indhaha shimbiraha cudurka qaba sidoo kale waxaa lagu sifeeyay dhibcahooda. … H5N1 HPAI wuxuu ku faafi karaa shimbiraha oo loo gudbin karaa dadka iyadoo ay ugu wacan tahay xiriir toos ah ama mid dadban oo lala yeesho shimbiraha cudurka qaba, sida sida xeroiyinka digaaga, saylada lagu gado/iibiyo iyo meelaha lagu qalay digaagga cudurka qaba. Waxa kale oo iyana jira xanuunka loo yaqaan (Swine flu) oo badnaaaba ka dhaca wadamada Reer Galbeedka kaas oo ku dhaxa inbnu,aadamka lagana qaado ama faafiyaan doofaarka iyo dadka dhexdiisaba loona yaqaan fayraska hargabka doofaarka, gaar ahaan noocyada A (H1) iyo A (H3). Waxana jira dhowr nooc oo loo yaqaan ‘coronaviruse’ oo ku wareegaya xayawaan aan weli cudurku
Hadaba calaamadaha caamka ee caabuqa waxaa ka mid ah astaamaha neef-mareenka ana cunaha oo ku xanuuna, qandho, qufac qalalan, neefsashada oo adkaata ama yaraata, iyo dhibaatooyin neefsashada
ah. Xaaladaha aadka u daran ee infakshanku wuxuu sababi karaa oof-wareen, xanuun daran oo xagga neefsashada ah, kilyaha oo ku dhinta ama ku istaaga iyo xitaa inuu sabab dhimasho.
Talooyinka heerka caadiga ah ee looga hortago faafitaanka cudurka waxaa ka mid ah gacmo-dhaqista joogtada ah, daboolida afka iyo sanka markii aad qufacayso ama hindhisayso, si fiican u karinta hilibka iyo ukunta iyo hadii aad booqato xero xoolaad/saylada xoolaha lagu gado, meelaha xaywaanka lagu hayo ama lagu daawado (zoo) iyo meelaha lagu qalo ama hilibkooda lagu gado inaad ka fogaato hadaad taabatana aad markiiba faraha iska dhaqdo (WHO). Ka
fogow xiriir aad la yeelatid qof kasta oo muujinaya astaamaha cudurada neefsashada sida qufaca iyo hindhisada. Hadaba su,aashu waa sidaynu uga foojigan karnaa si aynu nafteena, ubadkeena, walidkeena iyo bulshadaba u Ilaalino ilaahay ha ina ilaaliyee.
1. Saabuun ku dhaq gacmahaaga si joogto ah mudu 20- 30 daqiiqo ah ama si joogto ah oo si fiican gacmahaaga ugu nadiifi Gelka alkolada leh ama ku dhaq
saabuun iyo biyo.
Sabab? Gacmahaaga ku maydho saabuun iyo biyo ama ku isticmaal xoq alkolo leh alkolo waxay dishaa fayrasyo ​​gacmahaaga ku jiri kara.
2. Ka fogow dadka aan family ga ahayn ama Bulshada aad suuqa, shaqada, schoolada I,w,m, gaar ahaan kuwa aad ka shakido ama qufac/hindhiso aad ku aragto kana durug ugu yaraan 1 mitir (3 fuudh)masaafada u dhaxaysa naftaada iyo qof kasta oo qufacaya ama hindhisayo.
Sabab? Markuu qof qufaco ama hindhisto waxay ka buufiyaan ooy hawada raaciyaan dhibco yar yar sanka ama afkooda oo ay ku jiri karaan fayras. Haddii aad aad ugu dhow, waad ku neefsan kartaa dhibco dhibco ah, oo ay ku jiraan fayraska COVID-19 haddii qofka qufaca qabaa uu leeyahay cudurka. Ka fogow taabashada indhaha, sanka iyo afka
Sabab? Gacmuhu waxay taabanayaan meelaha dusha sare waxayna ka qaadi karaan fayras. Mar alla markay wasakhoobaan, gacmuhu waxay u gudbin karaan fayraska indhahaaga, sankaaga ama afkaaga. Laga soo bilaabo halkaas, fayrasku jirkaaga ayuu geli karaabwuuna ku xanuunsiin karaa. Ku dardaar ama ku boori ehelkaaga iyo Bulshada aad dhex degentahay inay nadaafada ku dedaalan maracana talaabooyinka la faray. Hubso in adiga, iyo dadka kugu xeeranba aad raacdaan nadaafad neefsashada wanaagsan. Tan macnaheedu waa inaad ku daboosho afkaaga iyo sankaaga xusulkaaga xuubkaaga ama unugyadaada markaad qufacayso ama hindhiseyso. Kadib tuur unugyada aad isticmaashay
isla markiiba aad qashinka ku rido.
Sabab? Dhibcuhu waxay faafiyaan fayras. Markaad raacdo nadaafad wanaagsan oo neefsashada ah waxaad ka dhawrtaa dadka kugu xeeran fayraska sida hargabka, ifilada iyo COVID-19, ayna u qaadin.
Haddii aad leedahay qandho, qufac iyo neefsashada oo ku adag, hore u raadi daryeel caafimaad oo WAC/garaac.
Guriga joog haddii aad dareento caafimaad darro. Haddii aad leedahay qandho, qufac iyo neefsashada oo kugu adag, raadso daryeel caafimaad oo horay u wac. Raac tilmaamaha maamulka caafimaadka deegaankaaga.
Sabab? Mas’uuliyiinta qaranka iyo kuwa maxalliga ahba waxay heli doonaan macluumaadka ugu dambeeyay ee xaaladda deegaankaaga. Soo wacitaanka hore waxay u oggolaan doontaa bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga inuu si dhakhso leh kuugu hago xarunta saxda
ah ee caafimaadka. Tani waxay sidoo kale kaa difaaci doontaa oo kaa caawin doontaa ka hortagga faafitaanka fayrasyada iyo cudurada kale.
La socodsii oo raac talobixiyahaaga daryeel caafimaad oo La soco wixii soo kordha ee ku saabsan COVID-19. Raac talooyinka ay bixiyeen daryeel caafimaad bixiyahaaga, maamulkaaga caafimaadka iyo hey’adaha caafimaadka bulshada ee degmada ama loo shaqeeyahaaga sida aad uga ilaalin karto naftaada iyo dadka kale
Sabab? Mas’uuliyiinta qaranka iyo kuwa maxalliga ahba waxay heli doonaan macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan in COVID-19 uu ku faafayo aaggaaga. Waxaa sida ugu wanaagsan shaqadan karanka loogu gamaday inay kaala taliyaan waxa dadka deegaankaaga ka socda ay tahay
inay naftooda difaacaan ooy iska jiraan halista fayraskan iyo faafintiisa.
Tallaabooyinka ilaalinta ee loogu talagalay dadka ku sugan ama dhowaan booqday (14 maalmood ee la soo dhaafay) aagagga ay COVID-19 ku fiday ama laga helay waa inay raacan nidaamka loo dejiyey ee Dawlada dalka ay degenyihiin.
Raac tilmaamaha kor lagu soo sheegay. Guriga joog haddii aad bilowdo inaad dareento caafimaad darro, xitaa astaamo fudud sida madax xanuun iyo san duuf yar, ilaa aad ka bogsato. Sabab? Ka fogaanshaha xiriirada lala yeesho dadka kale iyo booqashooyinka xarumaha caafimaadka waxay u oggolaaneysaa
xarumuhu inay si hufan u shaqeeyaan waxayna kaa caawinayaan adiga iyo dadka kale inaad ka ilaaliso COVID-19 iyo fayrasyada kale.
Haddii aad yeelato qandho, qufac iyo neefsashada oo ku adkaata, u raadso talo caafimaad dhakhso maadaama tani laga yaabo inay sabab u tahay caabuqa neefsashada ama xaalad kale oo halis ah. Horay u wac oo u sheeg bixiyahaaga wixii safar ah ee ugu dambeeyay
ama la xiriir dadka safarka ah. Sabab? Soo wacitaanka hore waxay u oggolaan doontaa bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga inuu si dhakhso leh kuugu hago xarunta caafimaadka saxda ah. Tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa ka hortagga suurtagalnimada faafitaanka
COVID-19 iyo fayrasyo ​​kale. Ilaahay ha inaga ilaaliyo ee idinkuna is ilaaliliya qofkii Allah u qadaro kolay seegimaayee isdejiya ilaahayna aamina, iskana ilaaliya wararkan badan ee run iyo beenba is dhexyaacaya yayna khalkhal idinku ridine. Wararka iyo fariimaha dawlada ee gudiyada ay u ximsaartay farayska iyo ilaha saxda ee dawlada uun raaca nidaamka ay idiin soo jeediyaan.Allah Mahad leh.Qalinkii Abdi Rahim Ibrahim Ahmed ( boodhari)Bartay xanuunadan (coronaviruses) waxay yihiin, qaabkay u shaqeeyan iyo sida looga hortago ama loo mareyo ee deg dega ah.